ဘယ်သူမှ မထင်ထားလောက်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုကြောင့် ပိုက်ဆံတွေ ကြိတ်စု ဖြစ်နေတဲ့ ခြူးလေး …. – Let Pan Daily
ဇာတ်လမ်းတွဲတွေရဲ့ ဘုရင်မလေး ခြူးလေးကတော့ “ပန်းနုသွေး”၊ “ထာဝရ မန္တလေး”၊ “ပဉ္စလက်ရွာ”၊ “ချစ်ရပါသောနွေ” စတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခြူးလေးက ဇာတ်လမ်း တွဲတွေများစွာမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေသလို ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်ကြီးတွေနဲ့လည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေသူလေး ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာ ကို ဝါသနာကြီးလွန်းတဲ့ ခြူးလေးက သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုလည်း ပရိသတ်တွေလက်ထဲ ထည့်ပေး ထားနိုင်သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လူငယ်တစ်ယောက်ပီပီ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် လွတ်လွတ် လပ်လပ်နေတတ်တဲ့ ခြူးလေးက ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေ ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားစေဖို့ စနောက်ထားပြန်ပါတယ်။ ခြူးလေးက “ယောက်ျား တင်တောင်းမလို့ …. ခုကတည်းက စုနေပါတယ် ….” ဆိုပြီး ယောကျာ်းယူမလို့ ပိုက်ဆံတွေစုဆောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကနေ တဆင့် ပရိသတ်တွေကို အရွှန်းဖောက်ကျီစယ်ထားပါတယ်။
ခြူးလေးကတော့ ကြီးကြီးမားမား ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုကြောင့် ပိုက်ဆံတွေ စုဖြစ်နေတယ် ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေကို စနောက်ကျီစယ်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခြူးလေး တစ်ယောက် အနုပညာအလုပ်တွေ အများကြီးထပ်လုပ်ရပြီး ပိုက်ဆံတွေ အများကြီး စုဆောင်းမိပါစေနော်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင် တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘယျသူမှ မထငျထားလောကျတဲ့ ရညျရှယျခကျြ တဈခုကွောငျ့ ပိုကျဆံတှေ ကွိတျစု ဖွဈနတေဲ့ ခွူးလေး ….
ဇာတျလမျးတှဲတှရေဲ့ ဘုရငျမလေး ခွူးလေးကတော့ “ပနျးနုသှေး”၊ “ထာဝရ မန်တလေး”၊ “ပဉ်စလကျရှာ”၊ “ခဈြရပါသောနှေ” စတဲ့ ဇာတျလမျးတှဲတှနေဲ့ အောငျမွငျခဲ့သူတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခွူးလေးက ဇာတျလမျး တှဲတှမြေားစှာမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျနသေလို ဝါရငျ့သရုပျဆောငျကွီးတှနေဲ့လညျး ရုပျရှငျဇာတျကားတှမှော ပါဝငျသရုပျဆောငျနသေူလေး ဖွဈပါတယျ။ အနုပညာ ကို ဝါသနာကွီးလှနျးတဲ့ ခွူးလေးက သူမရဲ့ ကိုယျပိုငျသီခငျြးလေးတဈပုဒျကိုလညျး ပရိသတျတှလေကျထဲ ထညျ့ပေး ထားနိုငျသူတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။
လူငယျတဈယောကျပီပီ ပြျောပြျောရှငျရှငျ လှတျလှတျ လပျလပျနတေတျတဲ့ ခွူးလေးက ဒီတဈခေါကျမှာလညျး သူမရဲ့ ပရိသတျတှေ ဇဝဇေဝါဖွဈသှားစဖေို့ စနောကျထားပွနျပါတယျ။ ခွူးလေးက “ယောကျြား တငျတောငျးမလို့ …. ခုကတညျးက စုနပေါတယျ ….” ဆိုပွီး ယောကျြားယူမလို့ ပိုကျဆံတှစေုဆောငျးဖွဈနတေယျဆိုပွီး သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာကနေ တဆငျ့ ပရိသတျတှကေို အရှနျးဖောကျကြီစယျထားပါတယျ။
ခွူးလေးကတော့ ကွီးကွီးမားမား ရညျရှယျခကျြ တဈခုကွောငျ့ ပိုကျဆံတှေ စုဖွဈနတေယျ ဆိုပွီး ပရိသတျတှကေို စနောကျကြီစယျထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခွူးလေး တဈယောကျ အနုပညာအလုပျတှေ အမြားကွီးထပျလုပျရပွီး ပိုကျဆံတှေ အမြားကွီး စုဆောငျးမိပါစနေျော။ ဖတျရှုပေးတဲ့ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျ တဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
မွငျရသူတိုငျး အသကျရှုဖို့ မသှေ့ားနိုငျတဲ့ အဝါရောငျလေး နဲ့ မျောဒယျဝငျးရှရေညျသငျး